दुर्लभ समय (कथा) | चितवन पोष्ट दैनिक
दुर्लभ समय (कथा)
२०७७ जेष्ठ २४, शनिबार ०९:४६ गते
एउटा निजी कम्पनीका एक सामान्य कर्मचारी राकेश, स्थानीय विद्यालयमा आयाको रुपमा काम गर्ने राकेशकी श्रीमती सुमित्रा, नियमित विद्यालय जाने बहिनी रोजी, छोरा रोहण, छोरी रोहिणी र सधैँ घरधन्दा र व्यवहारमा व्यस्त रहने आमा मनकुमारी, सबैको आआफ्नै छुट्टाछुट्टै दुनियाँ थियोे । कसैलाई आफ्नो कार्यबाट कहिले फुर्सद मिलेको थिएन । एकले अर्कोको हालचाल जान्नेबुझ्ने समय कसलाई थियोे र ! सबैजना बिहान–बेलुका औपचारिकताका लागिमात्र भेटघाट गर्थे । भन्नलाई त एउटै परिवार हो, तर कसैको मनको गहिराइ नाप्न कसैलाई फुर्सद थिएन ।
त्यो घरको आडभरोसा भनेकै विशेषगरी राकेश नै थियोे । उनैको जागिरबाट नै घरका न्यूनतम आवश्यकताहरु पूरा हुन्थ्यो । सुमित्राको आया जागिर त उसलाई हल्का सघाउने मेलोमात्रै थियो । बिहान उठ्यो, हातमुख धोएर निस्क्यो, अफिसमा मरिमेटी मेसिनले झैँ काम ग¥यो अनि थकित भएर घर आयो, खायो, सुत्यो । भोलि फेरि उही दिनचर्या । न सँगै खानु न सँगै बस्नु, न पहिलाजस्तो ठट्टा–ठट्टयौली गर्दै हाँस्नु, हँसाउनु । ऊ साँच्चीकै मेसिन बनिसकेको थियो । समयले स्वीच थिच्यो, अनि त्यही रफ्तारमा दौड्यो ।
समयलाई पछ्याउँदै तेज रफ्तारमा दौडिरहेको यन्त्रमानवझैँ लाग्ने मानिसहरुको गतिमा समयले नै झ्याप्प ब्रेक लगाइदिएसरी भयो अहिलेको लकडाउन । विश्वभरि फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) का कारण नेपाल सरकारले पनि सुरक्षाको निम्ति लकडाउनको घोषणा गरेसँगै राकेशको गतिमा पनि ब्रेक लाग्यो ।
उसलाई अब अफिस जानु थिएन । लकडाउनको दुई–चार दिन कोठाभित्रै मोबाइल खेल्दै, सुत्दै बित्यो । समयले एकलकाँटे र एकसुरे बनाइदिएको मन मोबाइलमा गेम खेल्दै र सामाजिक सञ्जालमा औँला नचाउँदै त्यो दुई–चार दिन आनन्दले आराम गर्दै बित्यो । तर, ती पलहरु पनि उसलाई झ्याउलाग्दो हुन थाल्यो । कति यसरी बस्ने भन्ने सोच्दै उसले भन्छातिरको बाटो ततायो ।
‘सुमित्रा, भान्छामा के–के छ ? केही स्पेसल परिकार बनाएर खाऔँ न ।’
एकलकाँटे श्रीमान्को कुरा सुनेर सुमित्रा चकित परिन् !
कुरा गर्ने, जिस्किने र जिस्काउने त उसका लागि एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको थियो । आमा, श्रीमती, छोराछोरीलाई उसले आवश्यकताभन्दा एक शब्द पनि बोली झार्दैनथ्यो । कहिलेकाहीँ फुर्सदको बेलामा पनि मोबाइलमै झुन्डिरहने बानी परेको उसलाई कसैले
डिस्टर्व नगरोस् भन्ने चाहन्थो । त्यसैले, उसको अनुरोधले सुमित्रालाई चकित पार्नु स्वाभाविकै थियो ।
‘खै, के बनाउने त ? मलाई त दाल, भात तरकारी र अचारबाहेक केही बनाउन आउँदैन’, सुमित्राले जिस्किने पारामा भनिन् ।
‘केक बनाऊँ न युट्युव हेर्दै ?’, निकै जाँगरका साथ राकेशले प्रस्ताव राख्यो ।
उसको प्रस्तावमा सुमित्राको पनि सहमति मिल्यो । युट्युवमा हेर्दै भनिएअनुसारका सकेजति सामग्री जुटाएर केक बनाउन थाले । अरु बेला बाबाको अघिपछि नपर्ने रोहण र रोहिणी पनि केक बनाएको हेर्न झुम्मिरहेका थिए । सबैजना रमाउँदै चाख मान्दै कहिले नबनाएको केक बनाउँदै थिए । कस्तो बन्ने होला भन्ने उत्सुकता सबैमा थियो । अरु बेला आआफ्नै दुनियाँमा रूमल्लिरहने आमा, बहिनी, श्रीमती, छोराछोरी सबै आफ्नो साथमा रमाउँदै गरेको देखेर राकेशको मन पनि प्रफुल्लित भयो । यो जीवन उसले धेरै समयपछि बाँचेको थियोे ।
केक पाक्यो । पाकेको केक हेर्दै सबैजना हाँस्न थाले ।
‘कस्तो बनेछ है दाइ ? युट्युवमा त कस्तो राम्रो बन्यो, हाम्रोचाहिँ’, रोजीले भनिन् ।
‘राम्रो त बन्थ्यो नि, त्यसमा भनेअनुसार गरेमा । घरमा बनाउने त के–के मिल्दैन के के, तैपनि खान त मीठै होला जस्तो छ’, सुमित्राले सबैलाई भाग लगाउँदै भनिन् ।
सबैले केकको आकारप्रकार, रङमा ध्यान नदिई मीठो मानेर खाए । सबै खुसी भए ।
बेलुकी खाना खाएर रोहण र रोहिणी हजुरआमासँगै टिभी हेर्न बसे । राकेश भने एकान्त कोठाभित्र बसेर मोबाइलमा गेम खेल्न व्यस्त भयो । उसलाई हठात् दिउँसोको रमाइलो क्षण याद आयो । आज सबैजना कति खुसी थिए भन्ने सोच्दै ऊ जुरूक्क उठेर गयो र टिभी हेर्न बसेका केटाकेटीको छेवैमा गएर बस्यो । बाबाको उपस्थितिले छोराछोरीमा असामञ्जस्य पैदा भयो । उनीहरुले एकअर्कालाई पुलुक्क हेरे । आफ्नो बाबा यसरी आफूसँगै बसेर टिभी हेरेको उनीहरुले कहिले थाहा पाएका थिएनन् ।
‘छोरी, यता आऊ न’, छोरीलाई आफूतिर तान्न खोज्दै राकेशले भन्यो ।
तर, बाबाको काखमा खेल्ने बानी नपरेकी छोरी आउन मानिन । त्यसैले, राकेशलाई भित्रभित्रै नरमाइलो अनुभव भयो । अरु बेला खासै वास्ता गर्न नसकेको वा वास्ता गर्नै नखोजेकोमा उसलाई खेद लाग्यो । कहिलेकाहीँ चञ्चल स्वभावका केटाकेटी चकचक गर्दै आफ्नो छेउमा आउँदा, सानोतिनो गल्ती गर्दा हप्काउने, रिसाउने, गाली गर्ने गरेकोमा उसलाई हुनसम्मको पश्चात्ताप लाग्यो । आफ्नो हप्कीदप्कीकै कारण केटाकेटी आफ्नो छेउमा आउन नमानेका हुन् भन्ने उसले निष्कर्ष निकाल्यो ।
‘बहिनी खोइ त आमा ?’, रोजीलाई वरिपरि नदेखेपछि उसले सोध्यो ।
‘आफ्नै कोठामा होली, भाउजूचाहिँको मोबाइल लिएर गा’थी’, आमाले सामान्य जवाफ दिइन् ।
‘एसइई रोकियो, आनन्दै भा’ होला त्यसलाई । अब पढ्नसढ्न छोडेर मोबाइलमा झुन्डिने भइसकी’, ऊ आफैँ भुतभुताउन थाल्यो ।
‘किन बर्बराउनुभएको ?’, कोठामा छिर्दै सुमित्राले भनिन्, ‘बिचरी, एसइईको कति तनाव छ उनलाई । तपाईंले ख्याल गर्नुभएकै छैन, यत्तिकै भुतभुताउनु हुन्छ ।’
राकेश केही नबोली सुमित्रालाई हेरिरह्यो ।
‘अनलाइनबाट पढाइ हुँदैछ उनको । अहिले शिक्षकहरु पनि अनलाइन आउनुहुन्छ रे । त्यसैले, मोबाइल लिएर गएकी हुन्’, सुमित्राले स्पष्ट पार्दै भनिन् ।
यहाँ पनि आफू गलत भएकोमा राकेशलाई नरमाइलो लाग्यो । अझ त्योभन्दा पनि एसइई स्थगित भएको दिन आफूले बहिनीप्रति गरेको व्यवहार सम्झेर ऊ अझ दुःखी भयो । वर्षभरि मिहिनेत गरेर उत्साहका साथ एसइई परीक्षाको तयारी गरेकी ऊ अघिल्लो दिन बेलुकी परीक्षा स्थगित भएको सुनी गहभरि आँसु पारेर बसेकी थिई । सम्हाल्न गाह्रो भएर रोइरहेकी आफ्नी बहिनीलाई उसले खुबसँग झपारेको थियोे ।
‘अहिले स्थगित भएर के भो त ? पछि भइहाल्छ नि, यसमा रूनुपर्ने कुरा के छ ?’, बहिनीको मानसिक अवस्था नबुझी उसले यसरी नै हप्काएको थियो । त्यसपछि झन् ठूलो स्वरले रूँदै आफ्नो कोठाभित्र पसेकी थिई । त्यसदिनदेखि यता उसले आफ्नो दाजुसँग राम्ररी बोलेकी पनि थिइन, आजै हो बोलेकी । त्यो क्षण सम्झेर उसको मन अमिलो भयो ।
उसले परिवारसँग समय बिताउन नपाएको धेरै दिन, धेरै महिना हुँदै धेरै वर्ष बितिसकेको थियो । लगाम लगाएको घोडाले सीधामात्रै देख्छ । उसको हबिगत पनि त्यही लगाम लगाएको घोडाजस्तै भएको थियो । कामको लगाम, थकानको लगाम, तनावको लगाम लगाएर सीधा दौडेको दौड्यै ।
‘म त सबैबाट कति टाढा भएको रहेछु, कसैको भावना नै बुझ्न नसक्ने भएँ’, राकेशले उदास हुँदै भन्यो ।
‘भावना नबुझ्ने हुनुभएको होइन, बुझ्ने चेष्टा नभएको हो’, सुमित्राले सहज हुँदै भनिन् ।
‘तिमीले ठीक भन्यौ सुमित्रा, सही हो । मैले चेष्टा गर्नुपर्छ’, यति भन्दै ऊ जुरूक्क उठेर गई रोजीको कोठातिर पाइला चाल्यो ।
रोजी भिडियो च्याटमा व्यस्त थिई । च्याटमा शिक्षक र अरु दुई जना साथीहरु पनि थिए । अचानक दाजुलाई कोठामा देखेर उनी छक्क परिन् ! साथीहरुलाई पछि कल गर्छु भन्दै मोबाइल बन्द गरिन् र दाजुलाई उत्सुकतापूर्वक हेर्दै बसिन् ।
राकेशलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तापनि बहिनीको पढाइ बुझ्ने चेष्टा गर्न कुराकानीलाई अघि बढायो ।
‘कस्तो चल्दैछ तिम्रो पढाइ ?’, राकेशको छोटोे प्रश्न थियो ।
‘राम्रो चल्दैछ दाइ, अहिले सामाजिकको छलफल गर्दै थियौँ’, रोजीले भनिन् ।
‘अस्ति बुझ्दै नबुझी मैले तिमीलाई हप्काएँ, सरी है’, राकेशले अप्ठ्यारो मान्दै भन्यो ।
दाजुको कुरा सुनेर रोजी भावुक भइन् । एसइईको अघिल्लो दिन चैत्र पाँच गते साँझ छ बजेतिर परीक्षा स्थगित भएको समाचार सुनेकी थिइन् । छाँगाबाट खसेझैँ भएकी उनले आफू सपनामा हो कि बिपनामा हो ठम्याउन सकेकी थिइनन् । किनकि, एसइई परीक्षा दिन गएको, परीक्षा नै छुटेका जस्ता बिपनाझैँ लाग्ने सपनाहरु उनले धेरैपल्ट देखिसकेकी थिइन् । त्यसैले, यो समाचार पनि सपना हो जस्तो लागेको थियो । धेरै पछिमात्रै उनले समाचार सही हो भनी ठम्याएकी थिइन् । त्यही अवस्थामा दाजुले झपार्दा उनको मानसिक तनाव सोह्रमाथि सत्र भएको कुरा उनले सम्झिन् ।
एकछिनको मौनतापछि रोजीले भनिन्, ‘त्यो दिन साँच्चीकै नरमाइलो दिन थियो । धेरै समयदेखि दिनरात नभनी खुबै मिहिनेत गरेका थियौँ, सर र म्यामहरुको पनि निकै मिहिनेत लागेको थियो हामीलाई तयारी गराउन । टाउको भाउन्न भएर रिँगाएको थियोे समाचार सुनेर । केही दिनअगाडि नै स्थगित गरेको भए पनि त्यतिसाह्रो हुने थिएन । भोलि एसइई परीक्षा दिने सपना तुन्दै कोठाभित्र बसेर दिनभरि पढ्दै बसेका मजस्ता सबै विद्यार्थीहरुलाई मलाईजस्तै भयो होला ।’
त्यति भन्दाभन्दै दाजुलाई उनले पुलुक्क हेरिन् । गम्भीर हुँदै बसेको राकेशले बहिनीलाई उत्साहित पार्न भन्यो, ‘त्यो तयारी त खेर गएको छैन नि, अब लकडाउन खुलेपछि परीक्षा छिट्टै नै होला ।’
‘तयारी खेर त जाँदैन दाइ, तर फलाम तातेको बेला हान्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो’, दाइको कुरा भुइँमा झर्न नपाउँदै रोजीले भनिन् ।राकेश केही बोलेन, केवल बहिनीलाई हेर्दै बस्यो । सानी चुलबुले बहिनी ठूली भएर यस्तो कुरा गर्न जान्ने भैसकेको उसले पत्तो नै पाएको थिएन, आज बल्ल मौका मिलेको थियो ।
दुई जना राति अबेरसम्म कुरा गर्दै बसे । राकेशले आफ्नी बहिनीको पढाइका साथै उसको भावना पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्दै थियोे । कुरा टुङ्ग्याएर गुड नाइट भन्ने बेलासम्ममा दुवै प्रसन्न मुद्रामा थिए ।
लकडाउनको समय फेरि एक हप्ता लम्बियो । कोरोना नियन्त्रणमा आएको थिएन । इटाली, इरान, अमेरिकालगायतका देशहरुमा लाखौँलाख मानिसहरु संक्रमितहरु भए भने मृत्यु संख्या पनि बढ्दै थियो । त्यसैले, नेपाल सरकारले फेरि तिमीहरु अझै घरमै बस, परिवारसँग समय बिताओ भन्यो । राकेश र उसको परिवार आज्ञाको पालना गर्दै घरभित्रै बसिरहे ।
‘ममी, मैले बनाएको चित्र राम्रो छ ?’, एकदिन रोहिणीले सुमित्रातिर कापी सोझ्याउँदै भनिन् ।
‘खोइ त, म पनि हेरुँ मेरी छोरीको चित्र’, सुमित्रातिर सोझिएको चित्रकापी लिन खोज्दै राकेशले भन्यो । तर, छोरीको मुख निन्याउरो भएको देखेर उसले आफ्नो हात हटायो ।
‘आहा ! कति राम्रो रै’छ, देखाऊ त बाबालाई’, आफूले हेरिसकेपछि कापी राकेशलाई दिँदै सुमित्राले भनिन् । राकेशले पनि चित्र हेर्दै मुक्तकण्ठले तारिफ ग¥यो, ‘आहा ! मेरी छोरीलाई यति राम्रो फूल बनाउन आउँदो रै’छ, मलाई त थाहै थिएन ।’
‘मलाई घर पनि बनाउन आउँछ’, तारिफले फुलेर राकेशको छेउमा जाँदै रोहिणीले भनिन् ।
‘हो र ? लौ त लौ, बनाएर देखाऊ’, मख्ख हुँदै राकेशले भन्यो ।
‘बाबा, मलाई त झन् हिमाल, रुख, चरा, मान्छेको चित्र बनाउन आउँछ’, अघिदेखि कसैको वास्तै नगरी साइकल खेल्दै बसेको रोहणले बहिनीलाई गरेको तारिफ सहन नसकेर बोल्यो ।
सुमित्राको आँखामा पुलुक्क हेर्दै मन्द मुस्कानका साथ राकेशले भन्यो, ‘ए हो र ? देखाऊ त देखाऊ ।’
दुवैजना आफ्नो बाबालाई चित्र बनाएर देखाउन तँछाडमछाड गर्न थाले । उनीहरु बाबाको मुखबाट प्रशंसाका अमृत बचन सुनेर निकै मख्ख परे । धेरै पछि त्यो परिवारमा यस्तो रमाइलो वातावरण छाएको थियो । सुमित्रा, आमा र रोजी तीन जनाको चर्तिकला हेर्दै मख्ख परे ।
‘स्कुलमा अरुका बच्चाहरु स्याहार्दास्याहार्दा आफ्नो बच्चाहरुलाई स्याहार्ने फुर्सदै भएन’, सियोमा धागो छिराउँदै सुमित्राले भनिन् ।
केटाकेटी चित्र कोर्दैमा व्यस्त थिए । सबैजना सुमित्राको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्दै थिए ।
उनले सिरानीको खोलमा सियो नचाउँदै फेरि भनिन्, ‘बिहान नौ बजे हतारहतार स्कुल गएर पाँच–छ बजेसम्म मेसिनले झैँ काम गर्नुपर्छ, अनि थकित भएर घर आउँदा कसरी बच्चाहरुलाई हेर्न सकिनु ? त्यसैले, मैले त यो समयलाई निकै मूल्यवान् ठानेकी छु । जति सकिन्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’
‘हो त, तिमीहरु भएर मलाई पनि धेरै सजिलो भा’छ’, प्रायः चुपचाप बसिरहने आमाले पनि मुख फोडिन्, ‘घरधन्दा, सरसफाइ गर्दैमा समय गएको थाहै हुँदैन । त्यसमाथि यी केटाकेटी चकचक गरेर हैरान नै पार्छन् । मेरो त सासै फुल्छ यिनीहरुलाई कराउँदा । अहिले त धेरै सजिलो भएको छ ।’
राकेशको दुर्लभ समय यसरी नै परिवारको साथमा हाँसीखुसीका साथ बित्न थाल्यो । कहिले पढ्ने÷पढाउने, कहिले मिलेर सरसफाइ गर्ने, अनि कहिले मिलेर पकाउने, खाने त कहिले विभिन्न खेलहरु खेलेर रमाइलो गर्दागर्दै उनीहरुले दिन बितेको पत्तै पाएनन् ।
लकडाउन फेरि पनि लम्बिँदै लम्बिँदै गयो । कोरोनाका कारण विश्वमा मृत्युु संख्या साढे एक लाखको हाराहारीमा पुग्यो । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या एक, चार, आठ, बाह्र हुँदै पैँतालीस पुग्यो । त्यसैले, लकडाउनका दिन लम्ब्याउनु र अझ कडाइ गर्नु स्वाभाविकै थियो । मानिसहरु अधैर्य भएर बाहिर निस्किने प्रयास गर्दथे, तर राकेशको परिवार भने धैर्यतापूर्वक रमाइलोसँग दिन बिताउँदै थिए । उनीहरुलाई यो लकडाउन आफ्नै सुरक्षाका लागि हो र यसलाई पूर्णतया पालना गर्नुपर्छ भन्ने सचेतता पनि थियोे । त्यसैले, अति आवश्यक सामग्री लिन, विशेषगरी तरकारी लिन राकेश आफैँ दुई–तीन दिनको एकपल्ट बाहिर निस्किन्थ्यो । कोलाहलबाट पर, मानसिक तनाव र शारीरिक थकानबाट मुक्ति, मात्र पारिवारिक प्रेमको मीठो अनुभूति मनमा सँगाल्दै उनीहरुको दिन बित्न थाले । न कहीँ पुग्ने हतारो थियोे न त केही छुट्ला भन्ने चिन्ता ।
एकदिन रोहण र रोहिणी एकअर्कासँग जिस्किँदै भाग्दै खेलिरहेका थिए । रोहिणीले रोहणलाई प्याट्ट हानेर भागी । रिसाएर रोहण बहिनीलाई पछ्याउन थाल्यो । भाग्दाभाग्दै लुक्ने ठाउँ नपाएपछि हजुरआमा हजुरआमा भन्दै पुकार्दै आमाको काखमा लुटपुटिन पुग्यो । यो दृश्य देखेर राकेश मुसुमुसु हाँस्दै हेरिरहेका थियो । अनायास उसको मानसपटलमा बाल्यकालको झझल्को आउन थाल्यो ।
त्यो काख त्यही थियो, जहाँ स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो । अरुको लाख आमाको काख भनेझैँ त्यस काखमा बस्न पाएपछि अरु सारा सुख फिक्का पथ्र्यो । मोबाइलमा समाचार पढ्दै बसेको ऊ पढ्न छोडेर आमालाई नियाल्न थाल्यो । निधारको छेउछाउमा फुल्न थालेको सेतो कपालले आँखामा डिस्टर्व गर्दै थियोे । निधार र गालामा जिन्दगीका अनेक दुःख, सुख र व्यवहारले बनाएका खोँचहरु देखा पर्न थालेको थियो । सानो छँदा डिम्पल बूढी भनेर बुबाले जिस्काउनुभएको कुरा उसले बिर्सेको थिएन । तर, अहिले त्यो डिम्पल सुकेर गहिरो डोब बनाउँदै चिउँडोको छेउसम्म लम्बिएको देखियो । बुबाको स्वर्गवासपछि एक्लो मन र एक्लो जीवनलाई बुझ्ने चेष्टा कहिले गर्न नसकेको महसुस भयो । भौतिक शरीर एउटै घरमा भए पनि आफूले आमालाई कहिले आत्मिक आडभरोसा नदिएकोमा खेद भयो ।
ऊ जुरूक्क उठेर गई आमाको काखमा लुटपुटिएर बसेकी छोरीलाई जिस्काउने बहानामा नजिकै बस्न गयो । ‘मेरी आमा हो, खोइ म सुत्छु’, छोरीलाई जिस्काउँदै आमाको काखमा टाउको अड्याउन खोज्यो, छोरीले नाइँनाइँ भन्दै उसको टाउको हटाउन खोजिन् ।
‘मेरो छोरो हो, तिमी उता जाऊ’, आमाले पनि मौका छोपेर नातिनीलाई जिस्काइन् ।
नभन्दै रोहण आफूलाई लखेट्दै अगाडि आइसकेको भएर रोहिणी त्यहाँबाट उठेर भागिन् ।
राकेश आमाको काखमा टाउको राखेर बसिनै रह्यो । आमालाई वर्षौंपछि आफ्नो मातृत्व सल्बलाएझैँ भयो । आफ्नै छातीको दस धारा दूध चुसाएर हुर्केबढेको छोरो आज वर्षौंपछि काख खोज्दै आउँदा एक्लिएको मनमा राहत महसुस गरिन् उनले । नातिनातिना त प्रायः साथमै रहन्थे, तापनि आज उनको छातीभित्र मातृत्व उर्लेको थियोे । चालै नपाई उनले राकेशको कपाल सुमसुम्याइन् । शब्द दुवैको फुटेन, तर दुवैको मनमा वार्तालाप चलिरह्यो ।
‘छोरा, यतिका वर्षसम्म तिमी कहाँ हराएका थियौ ?’
‘म यहीँ थिएँ आमा, तर समयको रफ्तारमा दौडिँदादौडिँदै समयले नेटो काटेको थाहै पाइनँ ।’
‘थाहा छ, म कति नीरस जीवन बाँचिरहेकी छु ? तिम्रो बुबाले छोडेर गएपछिको एकलास जीवन, नितान्त एक्लो ।’
‘हो आमा, म पनि एक्लो नै भौँतारिरहेको रहेछु । मन र भावना नै नभएका रोबर्टहरुझैँ । चारैतिर कोलाहल, चिच्याहट, मात्र मेसिनहरुको आवाज, रोबर्टहरुको आवाज ।’
‘छोरा, तिमी नै हो मेरो मनको आडभरोसा, यो परिवारको मुटु । दिल र दिमाग नभएको यन्त्रमानव नबन ।’
‘आमा, यो केही दिनमा मेरो मन फर्केको छ । छोराछोरीलाई बुबाले मलाई दिनुभएझैँ माया, प्रेम, स्नेह दिन सिकेको छु । सुमित्रालाई आफ्नोपन, आत्मीयता दिएको छु । आदर, सद्भाव दिएको छु । बहिनीको भावनालाई हृदयङ्गम गरेको छु । अनि, तपाईंको मातृस्नेहले आज फेरि आफूलाई सजीव र पूर्ण बनाएको छु ।’
यी दुई मनहरुको आत्मालाप एकअर्काले सुने नसुने पनि दुवैजना भावविभोर भए । धेरै वर्षपछि आमाछोराको आत्ममिलनले दुवैलाई भावुक बनायो । त्यही भावुकता आँसुको थोपा बनी आमाको आँखाबाट टप्प झ¥यो र राकेशको गालामा प¥यो । राकेशले ‘आमा’बाहेक अरु शब्द निकाल्न सकेन । दुवैजना यसरी नै धेरै बेर बसिरहे । निःशब्द बसिरहे, तर आत्मालाप गर्दै बसिरहे ।
लकडाउन थपिएर लम्बिँदै जाँदा मानिसहरु अधैर्य भएर बाहिरी दुनियाँको सुख खोज्दै गर्दा राकेश भने मानसिक सुख र शान्ति, पारिवारिक खुसी खोज्दै थियो । आफू र आफ्नाका लागि यस्तो समय पहिला त आएको थिएन र पछि पनि सायदै आउला ! त्यसैले, उसले आफू बच्न र अरुलाई बचाउनमात्रै नभई यस्तो दुर्लभ समयको सदुपयोग गर्ने विचार गरी आफ्ना वरिपरिका मनहरुसित खुसीसाथ बिताउने निष्कर्षका साथ लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्दै घरमै बसिरह्यो ।
कोरोनाबाट वरिष्ठ साहित्यकार सुवेदीको निधन